Home Siyaasadda Xisbiga Nabad iyo Nolol oo diyaarinaayo qorshayaal hallis ku ah Hassan Sheikh...
Xisbiga Nabad iyo Nolol oo diyaarinaayo qorshayaal hallis ku ah Hassan Sheikh Mohamud. .
Mogadishu (Radio Halgan) Xisbiga loogga awood batay hogaaminta Dalka uunna hogaamoye madaxweyne hore Mohamed Abdullahi Farmaajo ayaa waddo qorshayaal hallis ku ah Dowladda cusub uu hogaamin doonna madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud afarta sanno ee soo socoto.
Qorshayaashaan ayaa ah kuwa xirriir ah oo socon doonno afarta sanno ee uu xilka heyn doonno madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud manna ahan kuwa kalla joogsi yeellan doonno waxaanna soo dhamaaday mid ka mid ah qorshayaashaas waanna musalsalkii Fahad Yasiin qalqalka ku geliyay siyaasadda Somalia iyo madax baddan oo wadnaha farta ku haayo.
Waxaa hadda billaaban rabo musalsal kalle uu hogaaminaayo Jiis kullane dadkane u yaqaaniin jiis mareexaan waxaanna lasoo deyn doonnaa musalsalkaas mar dhow oo siddaa u fogeyn.
Waxaa ku xiggi doonno wax laggu sheegay Nabad iyo Nolol foundation oo aay ku bixin rabaan macaawino si shacabka looggu muujiyo taag darrada Dowladda uu hogaamiyo Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud.
Waxa aay ku soo wareeggi rabaan lix Gobol oo ka mid ah Dalka qudbaddo iyo shirarne ku qaban rabaan si aay u yareeyaan sameynta Dowladda .
Waxaay lawareegeen 40% warbaahinta Dalka ka howl gasha lacago aad u baddane waa aay ku bixiyeen qorshaha lagga leeyahayne waa in laggu sumcad diilo nidaamka Dowladda hadda lawareegtay taladda Dalka uu hogaamiyo Madaxweyne Hassan Sheikh Mohamud.
Waxaan xogtaan ka helnay xubno ka mid ah Nabad iyo Nolol
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Dagaal ka socda degaan ka tirsan Gobolka Hiiraan
Next articleIsraaiil oo muwaadiniinteeda Turkiga kusugan ku amartay in ay si deg deg ah
Jurrien Timber Oo Hal Wal-Wal Ka Qaba Ku Biirista Man United
Ma ogtahay in markii ugu horeeysay Alshabaab aay canshuur toos ah...